Mamiriro Echishanu Anofamba Inishuwarenzi Haazovharidzi muna 2018
Kunyange iyo yakanakisisa purogiramu yveshuwarisi inogona kunge isingabatsiri mumamiriro aya.
Gore roga roga, vafambi vakawanda vanotendesa mainishuwarenzi epamberi kuvadzivirira pasi pose. Muchiitiko chisingaoneki mutambo wakarasika kana kubiwa , kana kana mufambi akamanikidzwa kubvisa rwendo rwavo rwakarongeka , chirongwa che inshuwarheni chinogona kubatsira kana zvinhu zvisingakanganisi. Zvisinei, kunyange iyo yakanyanya kusimba inshuwarisi yemitemo inogona kuisa mamiriro ezvinhu ose anofungidzirwa.
Kubva pane zvikanganiso zvakashata kusvika kumabasa akaipisisa, ungave wakaodza mwoyo apo inshuwalisi yako yekurwendo inorambidzwa nekuda kwechikwata.
Iwe usati wafunga nezvekutenga inshuwarisi yekufamba , zvakakosha kuziva kuti izvi zvishanu zvinowanzoitika hazvigone kuvharwa.
Anozivikanwa nemazita akawanda, "kukanganisa" zvinoitika zvinoitika kana matikiti achienda kutengeswa pamitengo yakaderera yepamusoro nekuda kwekukanganisa kwenzira. Vakawanda vanotakura zvinhu vakatarisana nedambudziko iri mumwedzi ichangopfuura, kusanganisira United Airlines uye Singapore Airlines. Mune mamwe mamiriro ezvinhu, vafambi vanoedza kutasva pa "kukanganisa" vanogona kuwana kuti matikiti avo ekupedzisira akwaniswa. Ko kufamba kwako inshuwarano yepamberi kuchavhara ndege yako ichibvisa tiketi yako here?
Kana munhu anotakura achikwanisa kutenga tikiti ye "kukanganisa" uye achidzorera mari yako, kudai inishuwarenzi inorambidzwa nokuti hapana chikonzero chekutsvaga. Nemhaka yokuti iwe wakagamuchira kubhadharwa mari, rwendo rwekuregererwa kwehushuwarisi hahuzopa kugoverwa. Nokudaro, huwandu hweinishuwarenzi yekufamba haifaniri kuvhara tikiti yekukanganisa pachako-asi inogona kuvhara dzimwe mari dzinosangana neurwendo rwako, kusanganisira kubhadhara kusati kwabhadhara uye matikiti emitambo.
Rwendo rwekutsvaga nemhaka yekusvibiswa
Maguta akawanda eEast Asia anozivikanwa nezvakawanda kupfuura tsika dzavo. Nzvimbo dzakadai seBeijing neNew Delhi dzirikudziridza mukurumbira wevhu denga rakaderedzwa nekusvibiswa. Mhepo inozara-futi iri kuva nehanya kwakadai zvokuti Dhipatimendi reHurumende ruchazotanga kuyera kusvibiswa mumaguta munyika yose.
Kana hurumende ikaratidza kuchenesa, unokwanisa here kubvisa rwendo rwako?
Kunyange zvazvo mamwe mazano ekurapa angave akafukidzirwa, unogona kuora mwoyo nokuona kuti kusvibiswa kwakawandisa hakusi chikonzero chakavharidzirwa cherwendo rwokurasikirwa. Vaya vane hanya nekusvibiswa vanogona kufunga kuwedzera Kanzura kweChikonzero chipi nechipi kunobatsira pakufamba kwavo inshuwarisi. Sokutenga kwokutanga kuwedzera-kubatsirwa, Koshesa Chikonzero Chero Chipi nechipi chinokubvumira kubvisa rwendo rwako musati waenda chero chikonzero chipi zvacho, uye uchiri kugamuchira kubhadhara zvishoma zvezvaunoshandisa.
Taura nemitambo uye mitambo yakawanda paunenge uri muzororo
Munhu wose anofamba ane bhuku rakanyora. Kunyangwe iri kushanda pamwe nehando muSpain kana kudonha-diving muMexico, munhu wese ane chimwe chinhu chavanoda kuedza kamwechete kamwe. Kana ukasarudza kurarama hupenyu huzere zvakakwana, uchaenda nehushuwarisi iwe uchienda kune imwe nhamo here?
Kana iwe uchida kuedza mutambo kana chimwe chiitiko chinokuvadza - kunyange kukwira kwemakomo - unofanirwa kuona kuti mabasa ako akafukidzirwa. Makambani akawanda einishuwarenzi anopa chimwe chinhu chinokuvadza chinowedzera-pane kugoverwa, apo, kana chakatengwa, kuchaita zvinhu zvakawanda zvakajairika zvinowanzoita ngozi.
Zvitemo zvakatengwa mushure mezviitiko zvinozivikanwa
Iyi inowanzoitika iyo inobata vafambi gore negore.
Mushure mokunge mushanyira rwendo rwenyu, mamiriro emamiriro ekunze kana chimwe chiitiko chechisikigo chinogona kuparadza zororo rako. Kubva kunonzi mazita echando mhepo kunotsvaga mhepo ine dutu , njodzi inongoitika dzoga inogona kutarisa rwendo nokukurumidza. Kana iwe ukatenga mutemo mushure mekuitika kukuru, unofamba nehushutukuvha iwe kana zvikaitika zvakare?
Kana imwe nguva dutu rakatumidzwa kana chiitiko chechisikigo chinozivikanwa, ichi kazhinji chinova "chiitiko chinozivikanwa." Somugumisiro, inshuwarisi yekufamba yakatengwa mushure me "chiitiko chinozivikanwa" ichiziviswa chingave chisingatauri chinyorwa chekuregererwa kana kuti kunonoka kuenda kune zvakakonzerwa zvakananga nechiitiko chacho. Kana iwe uine hanya nekutenderera pakureba kwechimvuramabwe mumwaka kana mumoyo wechando, tenga yako inshuwarisi purogiramu kuti uone kuti iwe wakavharwa.
Kufamba mukati memunharaunda yako
Chimwe chinhu chaungave usina kumbofunga nezvazvo ndechokuti inshuwarisi yekufamba ingakubatsira sei uchigara mukati memunharaunda yako.
Kana iwe uchitenga inshuwarisi yekufambisa yekufambisa kwekuenda kumba, iwe uchakwanisa here kutora kuda kana zvinhu zvichienda hary?
Kunyange zvazvo mamwe ma inshurensi ekufambisa achakufukidza iwe kana iwe uri makiromita 100 kubva kure, kubva kune imwe nzvimbo zvirongwa zveinishuwarenzi yekurwendo zvinongobhadhara mari yekurapa paunoshanyira imwe nyika. Zvisinei, zvimwe zvikomborero - kusanganisira kutambisa kufamba uye kutakurwa kwemitoro - zvingave zvichiri kushanda chero bedzi iwe uri kure zvakakwana kure nemusha. Usati watenga inishuwarenzi yefambi yekufamba, iva nechokwadi chokuti unonzwisisa zvipi zvinobatsira zvinoshandiswa paunogara munyika yako.
Kunyange zvazvo inshuwarisi yekufambisa inobatsira vanhu vakawanda pasi pose gore negore, kune dzimwe mamiriro ezvinhu apo kubata chirongwa hachikwani. Nokunzwisisa mamiriro ezvinhu asina kuvharwa nehutano inshuwarani, vanofambira vanogona kuita zvirongwa zvakanakisisa pavanoronga rwendo rwavo runotevera.
Apo Icho Chikonzero Chakanaka Chokutenga Inhamba Inishuwarenzi
Chii Chinonzi Kuparadzana KweInishuwarenzi?
Usaita Iko 7 Travel Insurance Mistakes
Chii Chinonzi Kurasikirwa KweInishuwarenzi?
Disney California Adventure Shows uye Zvokuvaraidza
Migwagwa Yakanakisisa Yokutenga muPortland, Oregon
Nzira Yokuita Mincemeat
Connecticut Inowanikwa Mawere Mafambiro Okufambisa
Kuratidzwa kweSpain nePortugal kubva kuLisbon
Tennessee Theme Parks neMvura Parks
Krisimasi muHong Kong
Guta reK Oklahoma City White Water Bay